संगीत मा एक प्रभाव छ भन्ने तथ्यलाई जीवित जीव, लामो ज्ञात गरिएको छ। पनि 3rd शताब्दीमा ई.पू. Parthia मुटु दुखाइ र स्नायु विकार को उपचार को लागि मेलोडीज छानिएको। केही कुल अमेरिकन इन्डियनस् ध्वनि को मदत पाएर तपाईं स्वर्ग र पृथ्वीको शक्ति जडान गर्न सक्नुहुन्छ कि विश्वास गरे। ओजिब्वा इंडियन्स रोगी वरिपरि बसे र सँगैको आफु कद्दू rattles गीतहरू गाए। एक चिकित्सकीय संगीत इंडियन्स Winnebago को घाउ निको पार्न मदत गरे। पनि rattles र ड्रम बिरुवाहरु को निको गुण अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिन्छ। पाइथागोरस पनि केही rhythms र मेलोडीज आधारित थियो जो संगीत, बना। उनको मदत पाएर उहाँले मात्र होइन मान्छे उपचार, तर पनि आध्यात्मिक अनुरूप पुनःस्थापित। एक समय उहाँले पनि एक क्रोधित मानिस, डाह को एक फिट मा, घर तल बाल्न चाहन्थे जो को मद्दतले संगीत शान्त गर्न व्यवस्थित। पहिले उसलाई भनेर हामी कुनै पनि नातेदार वा छिमेकी सामना गर्न सकेन हुनत।
पछिल्लो दशकमा, फेरि त्यहाँ संगीत चिकित्सा मा एक वृद्धि चासो छ। चिकित्सकीय संगीत पश्चिमी, अब तीन तरिकामा प्रयोग गरिएको छ। यो पेशागत चिकित्सा र केही अस्पताल मा विरामीहरु को समुदाय उपचार, अक्सर मानसिक बिरामी लागि, दुखाइ कम गर्ने प्रयोग गरिन्छ। वैज्ञानिकहरूले यस चिकित्सा धेरै रोगहरु को छुटकारा प्राप्त गर्न सबैभन्दा आर्थिक र safest तरिका हो भनेर पाएका छन्। साथै, संगीत चिकित्सा कुनै contraindications छ।
सुखद माधुर्य circulatory प्रणाली स्नायु प्रणालीमा लाभदायक प्रभाव, पाचन र श्वसन को अंगहरु। चिकित्सकीय संगीत रगत lymphocytes संख्या बढ्छ। यो शरीर लडाई रोग मद्दत गर्छ। कुनै पनि अवस्थामा, एक समयमा मानव मा चयापचय सुधार, को स्नायु प्रणाली calms, रक्त र साँस बढावा सुरिलो लय सुनिन्छ गर्दा। जस्तै संगीत सुन्न गर्नेहरूलाई के अनिद्रा, खराब मुड, अनिश्चितता को एक भावना र भूल हुन सक्छ खराब स्मृति। राम्रो संगीत पनि रचनात्मक क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ।
मानव शरीर मा संगीत को यो प्रभाव, वैज्ञानिकहरूले मानिसको बित्तिकै एक कम्पन सिस्टम छ भन्ने तथ्यलाई व्याख्या। र संगीत पनि समिकरण र व्यवस्थित कम्पन। मेलोडी मानव सिस्टम यसको क्रम बनाउँछ र यसको आफ्नै तरिका समायोजित हुन्छ। र रोग के हो? यो रोगी को शरीर शरीर बाँकी अनुरूप हुन ceases जुन बेलामा एक प्रक्रिया हो। र यो desynchronization संगीत को मद्दतले या त बृद्धि वा सबै हटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सही संगीत छनौट को बस एक कुरा लायक छ।
मान्छे को बहुमत बीचमा कि भारी संगीत, रक जस्ता, आत्म-विनाश शरीर समायोजित को धारणा हो, र शास्त्रीय harmonization बढवा दिन्छ। तर सबै त सरल छैन। विभिन्न मान्छे नै संगीत भावना को एक किसिम हुन सक्छ। र सबै शास्त्रीय काम - यो चिकित्सकीय संगीत छ। साथै, शरीर को आत्म-विनाश सबै रक संगीत मद्दत। उदाहरणका लागि, Chopin गरेको सिर्जनाहरू को केही मनोवैज्ञानिक विष रूपमा प्रति व्यक्ति हुन्। तिनीहरूलाई मा संगीतकार आफ्नो कमजोरी र melancholy व्यक्त गरे। त्यसै गरी, मानिसहरूलाई प्रभाव र स्ट्रस वा वाग्नर को "Venisbergskaya दृश्य" को काम धेरै।
अर्को कुरा Mozart। आफ्नो संगीत जीवित जीव र inanimate वस्तुहरु दुवै मा एक लाभदायक प्रभाव छ कि एक सार्वभौमिक उपकरण हो। वैज्ञानिकहरूले Mozart सुन्न जो गाई कि, पैदावार वृद्धि फेला पारेका छौं। र जापानी आफ्नो संगीत को रोटी थप रसीला र थप सुगन्धित खातिर हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो संगीतकार गरेको कामहरू गर्दा मानसिक तनाव र निराशा टाउको दुखाइ र सर्दी लागि सुनिरहेको सिफारिस। छोटो मा, सधैं र सबैतिर।
एक लोकगीत। तंग लोरी लिनुहोस्। यो चिकित्सकीय निद्रामा लागि संगीत नरम संगीत, lulling ताल र वर्दी ध्वनि एक उज्ज्वल शान्त प्रभाव धन्यवाद छ। लोरी बच्चा संग भावनात्मक र आध्यात्मिक बन्धन बलियो मद्दत गर्छ, र सोही समयमा आमा द्वारा अनिद्रा को छुटकारा प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। sonatas, concertos, symphonies र लेट 18 औं र 19 औं शताब्दीपछि को स्ट्रिङ Quartet रचयिता को धेरै ढिलो आन्दोलनहरु मा, बस यी लोरी को मुख्य विशेषताहरु प्रस्तुत।
पनि संगीत चिकित्सा ठूलो योगदान चिनियाँ निको संगीत बनाउँछ। यो देशमा चिकित्सा संगीत र ध्यान धेरै ध्वनि दिन्छिन्। उदाहरणका लागि, क्षेत्र वांग Xu-दांग मा एक डाक्टर मानव प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो योगदान र निको र नै मर्मत गर्न आफ्नो क्षमता सुधार कि जादू मेलोडीज सिर्जना गर्न सक्षम थियो। यस्तो erhu, guzeng, जिओ डि, शेंग, pipa, Zong-hu, साथै सेलो, भाइलिन र आवाज रूपमा चिनियाँ साधन प्रयोग संगीत सिर्जना गर्न। यी मेलोडीज प्राण, शरीर र मानिसको मन को मद्दतले एक सिस्टम मा निर्माण गरिन्छ।
तपाईं के vocalize थाहा छ?
जमाल (गायक): जीवनी, रचनात्मकता र व्यक्तिगत जीवन
फल र जामुन - currants: उपयोगी गुणहरू
को सफाई कम्पनी को निर्देशन रूपमा सामान्य सफाई
को माइक्रोवेव मा भद्रगोल अन्डा र यसको अन्य व्यञ्जनहरु
ओडेसा रेलवे स्टेशन: ठेगाना, वेबसाइट, टिकट